kuphazamiseke uhlelo lukamgabhi - Ilanga News
Home Ezemidlalo kuphazamiseke uhlelo lukamgabhi
kuphazamiseke uhlelo lukamgabhi
UKUMISWA kwezinto eNingizimu Afrika ngenxa yeCovid-19 kuphazamise izinhlelo zikaNontuthuko Mgabhi (osesithombeni) zokwakhiwa kwesikole samabanga aphansi iKhiphinkunzi Primary School esiseMtubatuba.
UNontuthuko umangaze abaningi ngenyanga kaNhlolanja (February) egijima amaMarathon ayisikhombisa izinsuku eziyisikhombisa emazwenikazi ayisikhombisa ngenhloso yokusungula isikhwama sokwakha amakilasi ayisikhombisa alesi sikole.
Lo msubathi uqeqeshwa nguProdigal Khumalo okungomunye wabasubathi abahlonishwayo kwezokugijima eNingizimu Afrika. Uhlelo lokwakhiwa kwamakilasi bekufanele luqale ngenyanga edlule ngemuva kokuba ethole abaxhasi bakwaGlencore okuyinkampani ezinze eGoli. Ngenxa yeLockdown kuphoqeleke ukuba kume yonke into ngenhloso yokuzama ukunqanda ukusabalala kwaleli gciwane.
“Indaba yeCoronavirus iziphazamise kakhulu izinhlelo zokuqalwa kokwakhiwa kwesikole. AbakwaGlencore bebethembise ukusiza ukuba kuqalwe ukuba kwakhiwe. Ngaphandle kwabo ziningi nezinye izinkampani ebezizimisele ukufaka isandla. Uma kuphela lesi simo esibhekene naso eNingizimu Afrika kangazi noma bazoqhubeka yini nokweseka iphupho lami. Yize kunjalo ngeke ngibasole ngoba izinkampani ezininingi zibhekene nomkhulu umsebenzi wokusiza abantu base-Ningizimu Afrika. Abanye banikela ngokudla kanti ngendlela isimo esiyisona lesi sifo sizoshiya umno-tho waseNingizimu Afrika usesi-mweni esibi.
“Inhloso yami ukuqongelela imali elinganiselwa kuR3.5-million kodwa manje imali esikhona ilinganiselwa ku-R2.3-million. Bese kusele kancane ukuba ihlangane lemali,” kusho uNontuthuko oyiGeneral Manager of Human Resources eRichards Bay Coal Terminal (RBCT).
Lo msubathi ongowokuzalwa eMseleni ngemuva kokuqeda ama-Marathon ayisikhombisa, ubezobamba iqhaza kwiComrades Marathon ehlehliselwe usuku olungaziwa.
Ephawula ngeComrades Marathon uthe ngokwakhe lo mjaho bekufanele ungabi khona nonyaka. Uthi isimo esibhekene nezwe sinzima kakhulu kasikho isidingo sokuba kuphoqwe izinto.
“Ngokwami ngingajabula uma lo mjaho ungagijinywa uma sekutholakale ikhambi lalo mkhuhlane futhi kungasekho noyedwa omuntu okuthiwa uneCovid-19.
“Lo mjaho ungenelwe ngabantu abangaphezulu kuka-27 500 abaphuma kuwo wonke amagumbi omhlaba. Le nkinga ingaphezulu kweComrades Marathon.
“Bengicela abasubathi ukuba balandele imiyalelo kahulumeni baziqeqeshe behleli emakhaya,” kuphetha uNontuthuko.
Previous articlekuhlelwe umjaho ongavamile ozogijinyelwa emakhaya
Next articleUkhala ngamashwa umdlali wase-kzn